Bitcentral ၏မီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာအကြောင်းအရာဖန်တီးသူများအတွက်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇာတ်လမ်းများကိုပြောပြပါ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » Bitcentral ၏မီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာများသည်အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများကိုပိုမိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောဇာတ်လမ်းများပြောပြရန်ကူညီသည်
ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာလောကမှာအကြောင်းအရာလိုအပ်ချက်ကကြီးထွားလာတယ်၊ ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲမှုကပိုပြီးတောင်းဆိုလာတယ်။ ၎င်းသည်အကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးသူများအတွက်သာမကစိတ် ၀ င်စားဖွယ်အကောင်းဆုံးအဖြစ်အပျက်များကိုသာမက ၄ င်းတို့၏အမှတ်တံဆိပ်၏အဓိကသတင်းစကားနှင့်ကိုက်ညီသောပရိသတ်ကိုစုဆောင်းရန်နှစ်ဆကောင်းစေသည်။ Bitcentral မီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာများနှင့်ဗွီဒီယိုအကြောင်းအရာကို၎င်း၏အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးကိုရရှိစေသည့်စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းနည်းများနယ်ပယ်တွင်အထူးကျွမ်းကျင်သည်။ တကယ်တော့ကုမ္ပဏီရဲ့ထုတ်ကုန်အတော်များများဟာရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ရေးလုပ်ငန်းမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖန်တီးသူတွေကိုအမြင်အာရုံချဲ့ထွင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲမယုံနိုင်စရာဖြစ်အောင်ဖန်တီးရာမှာအထိရောက်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်
ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်ကျော် Bitcentral မီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်၎င်းတို့၏ဗွီဒီယိုအကြောင်းအရာများ၏တန်ဖိုးကိုတိုးတက်လိုသောထုတ်လွှင့်သူများအတွက်စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းနည်းများကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီရဲ့ Core News ဖြေရှင်းချက်သည်ယူအက်စ်တွင်နံပါတ် ၁ သတင်းထုတ်လုပ်မှုပလက်ဖောင်းဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်သန်းပေါင်းများစွာသို့ရောက်ရှိသည်။ နောက်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု ဗဟိုထိန်းချုပ်မှု playout အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်များအားလုံးကို execute လုပ်ရန် modules များနှင့်အတူ master control operating အတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် toolset ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ လောင်စာသည် bitcentral ရဲ့ ဝယ်လိုအားအရှိဆုံးတီထွင်မှုနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်း - ပြောင်းလဲနေတဲ့ Linear ။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှအသံလွှင့်ဌာန ၁၀၀၀ ကျော်ပေါ်တွင်မူတည်သည် bitcentral ရဲ့ သတင်းထုတ်လုပ်မှုနှင့် master control အလိုအလျောက် software ကို။ ထိုအများ၏အကူအညီဖြင့် လောင်စာယခုတွင်သူတို့သည် OTT၊ ဝက်ဘ်၊ အက်ပလီကေးရှင်းများ၊ မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအပြင်လူမှုမီဒီယာနှင့်စုစည်းမှုများစသည့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းများမှတစ်ဆင့်စိတ်ကြိုက်အကြောင်းအရာများကိုပစ်မှတ်ထားပြီးပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။
အတော်ကြာ Bitcentral's features တွေဖြေရှင်းချက်များပါဝင်သည်:
မာစတာထိန်းချုပ်ရေး & အလိုအလျောက်
ဒစ်ဂျစ်တယ် & OTT
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှ စ၍ Bitcentral ထုတ်လွှင့်သောပညာရှင်များသည်၎င်းတို့၏အကြောင်းအရာများနောက်ကွယ်ရှိလုပ်ငန်းအသွားအလာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့်ထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည့် ဦး ဆောင်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ ဤထုတ်ကုန်အများအပြားပါဝင်သည်:
bitcentral ရဲ့ Prism ကို သတင်းထောက်များ၊ ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဒါရိုက်တာများကိုပြောပြရန်လိုသည့်ဇာတ်လမ်းများကိုချိတ်ဆက်နိုင်သည့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် NRCS ပလက်ဖောင်းကိုလည်ပတ်သည်။ ဤပလက်ဖောင်းသည်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံးသတင်းခန်းတွင်ပူးပေါင်းပါ ၀ င်စေသည်။ ပြီးတော့ဒီပူးပေါင်းမှုမှာ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်နှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့် ပတ်သတ်၍ ရိုးရာပရိသတ်မှမနှစ်သက်သောအကြောင်းအရာများကိုထုတ်ဝေခြင်းပါဝင်သည်။ နောက်ကွယ်မှပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဗိသုကာ Prism ကို ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုသတင်းခန်းနှင့် WAN ဆက်သွယ်မှုကို ဖြတ်၍ ၎င်းတို့တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှအဖြစ်အပျက်များကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ Prism ကို ၎င်းကို modular platform တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းသည်ကြီးထွားလာနေသောသတင်းခန်းမဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများကိုဖြေရှင်းရန်၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များကိုအလွယ်တကူထည့်နိုင်သည်။
လည်ပတ်ခြင်းအားဖြင့် Prism အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ bitcentral.com / ထုတ်ကုန် / prism ကို / ။
bitcentral ရဲ့ Oasis ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် အသုံးပြုသူများသည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးနှင့်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးဇာတ်လမ်းများကိုဖော်ပြရန်အတွက်အသုံးပြုသူများသည်လက်ပ်တော့များ၊ တက်ဘလက်များနှင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များမှပံ့ပိုးပေးသည့်လုံခြုံစွာစီမံထားသောဖိုင်လွှဲပြောင်းမှုစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၏အဓိကအကျိုးကျေးဇူး အိုအေစစ် အလွန်ပြင်းထန်သောတစ်ခါမျှမရှိခဲ့သည့်ထူးခြားသောအရည်အသွေးမြင့်ပရိုဂရမ်များဝယ်ယူမှုမှလာသည်၊ ၎င်းသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုမြန်ဆန်သောနှုန်းဖြင့်ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိသောပုံပြင်များကိုဖန်တီးခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ The Oasis ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ခွင့်ပြုထားသောဘူတာအားလုံးတွင်လုံလုံခြုံခြုံမျှဝေခြင်းခံရပြီး၎င်းသည်ဝေးလံသောဇာတ်လမ်းထုတ်လုပ်မှုတွင်ကူညီရန်အတွက်အကြောင်းအရာများကိုတင်ခြင်း (သို့) ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသူများကိုကွင်းဆင်းအသုံးပြုသူများအတွက်လည်းရရှိနိုင်သည်။
လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းအားဖြင့် Oasis အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ bitcentral.com / ထုတ်ကုန် / အိုအေစစ် /? utm_source = nabweb ။
bitcentral ရဲ့ multipath အထူးပြုလုပ်ထားသော Oasis MAM အဆင့်မြှင့်တင်မှု module တစ်ခုအဖြစ်ပြုလုပ်သည်။ MultiPath's ဗွီဒီယိုဒီဂျစ်တယ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းစနစ်နှင့်ပေါင်းစပ်သည် Bitcentralအသံလွှင့်ဌာနများအစဉ်အလာစံချိန်စံညွှန်းထက် ကျော်လွန်၍ ကြီးထွားလာရန်ခွင့်ပြုသည့်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးကိရိယာများအပြည့်ပါ။ bitcentral ရဲ့ multipath မီဒီယာထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြည့်အဝမြင်နိုင်သော module တစ်ခုစီကိုအရာရာအားလုံးကိုအတူတကွစုစည်းနိုင်ခွင့်ပြုသည်။ ထုတ်ဝြေခင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖန်တီးပြီးပါကပုံစံချထားပြီးအလိုလိုသိသောမျက်နှာပြင်သည်အသုံးပြုသူအား OVP၊ CMS နှင့်လူမှုမီဒီယာအကောင့်များကိုထုတ်ဝေခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်စီမံခြင်းပြုလုပ်ရန်လမ်းညွှန်ပေးသည်။
ပိုမိုရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းကိုလေ့လာပါ bitcentral ရဲ့ လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းအားဖြင့် MultiPath bitcentral.com / ထုတ်ကုန် / multipath / ။
ဗဟိုထိန်းချုပ်မှု ပြည့်စုံပြီးအပြည့်အဝပေါင်းစည်းမာစတာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အလိုအလျောက် software ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည် modular design toolset ကိုထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့်အသုံးပြုမှုလွယ်ကူမှုကိုထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲအော်ပရေတာများ၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့် playout အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေသောလုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးကိုစီမံပေးသည်။ မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်သိုလှောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အော့ဖ်လိုင်း playlist အစီအစဉ်ဆွဲခြင်း၊ ပရိုဂရမ်ကတ်တလောက်တည်းဖြတ်ခြင်း၊ မီဒီယာတည်းဖြတ်ခြင်း / ပုံစံထုတ်ခြင်း၊ စနစ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အစီရင်ခံခြင်း၊ ၎င်းသည်ထုတ်လွှင့်သူများအသုံးပြုရန်အတွက်အခြေခံအားဖြင့်ပိုမိုထိရောက်သောလုပ်ငန်းအသွားအလာဖြစ်သည်။
သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းဖြင့်ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ bitcentral.com / ထုတ်ကုန် / ဗဟိုထိန်းချုပ်မှု /? utm_source = nabweb ။
ပြန်လာခဲ့ လောင်စာ, ဒီဒစ်ဂျစ်တယ် streaming နှင့်ငွေရှာခြင်းဖြေရှင်းချက်စျေးကွက်အတွက်အရှည်ဆုံး session တစ်ခုကြာချိန်ရှိပါတယ်။ ၎င်းသည်ပရိသတ်များပိုင်ရှင်များ၊ အကြောင်းအရာပံ့ပိုးပေးသူများနှင့်ကြော်ငြာရှင်များအတွက်ကြော်ငြာစွဲမှတ်ဆယ်ဆကိုထုတ်ပေးသည်။ ထို့အပြင်အခြား streaming ပလက်ဖောင်းသည်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူတူပင်ပိုမိုထိတွေ့သောကျောရိုးကိုမကယ်နိုင်ပါ လောင်စာဆီ တိုးတက်မှု၌ပူးပေါင်းခြင်း၊ အအေးပွင့်ခြင်း၊ တိုက်ရိုက်ပါဝင်သောအရာများကိုထည့်သွင်းနိုင်ခြင်းနှင့်ကြည့်ရှုသူများကိုဖယ်ရှားပေးသည့်ကြိုတင်ပေးမခြင်းများပါ ၀ င်သည့်အင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သည့် cloud-based ပလက်ဖောင်းတွင် dynamic လိုင်းများကိုစွမ်းအားပေးသည်။ အဖြေများကြော်ငြာပိတ်ဆို့သူများသည်ကြော်ငြာများကိုမထိခိုက်ပါ။ ကြည့်ရှုသူများသည်အချိန်နှင့်နေရာများနှင့်ပလက်ဖောင်းများအားလုံးတွင်ကြည့်ရှုခြင်းကိုကြည့်ရှုပျော်မွေ့သောကုန်အမှတ်တံဆိပ် - လုံခြုံသည့်စီးဆင်းမှုထဲသို့လွယ်ကူစွာထည့်သွင်းထားသည်။
FUEL အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ bitcentral.com / ထုတ်ကုန် / လောင်စာဆီ / ။
မည်သည့်ထုတ်လွှင့်မှုပညာရှင်မဆိုအံ့သြဖွယ်ကောင်း။ အမြင်အာရုံကိုဖမ်းယူနိုင်သည့်ဗွီဒီယိုအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ နောက်တစ်ဆင့်မှာအကြောင်းအရာတောင်းဆိုမှုများနှင့်လုပ်ငန်းခွင်စီးဆင်းမှုကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ဦး ဆောင်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီများကဲ့သို့ဖြစ်သည် Bitcentral ကြောင်းနှင့်အတူကူညီနိုင်သည်။ ၄ င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်ဖြေရှင်းနည်းများပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လွှင့်တဲ့ပညာရှင်ဖန်တီးတဲ့ဗွီဒီယိုအကြောင်းအရာဟာကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရရှိနိုင်တဲ့အရာအားလုံးရှိတယ် Bitcentral ၎င်းသည်ထုတ်လွှင့်ရေးလုပ်ငန်းရှင်သန်ကြီးထွားလာနေသောအလွန်ဒစ်ဂျစ်တယ်နယ်ပယ်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်သည်။
အကြောင်းပိုသိချင်တယ်ဆိုရင် Bitcentral, ယခုခရီးစဉ် bitcentral.com /
Bitcentral ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်း ဗဟိုထိန်းချုပ်မှု™ အကြောင်းအရာ အကြောင်းအရာဖန်တီးသူ Core News ™ဖြေရှင်းချက် စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းချက် ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ ဖိုင်လွှဲပြောင်းမှုစနစ် လောင်စာ On Demand ကို Linear မာစတာထိန်းချုပ်မှုအလိုအလျောက် မီဒီယာ Workflows multipath NRCS ပလက်ဖောင်း Oasis ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် Prism ကို ဝေးလံသောဇာတ်လမ်းထုတ်လုပ်မှု လူမှုမီဒီယာနှင့်စုစည်း 2020-05-08
နောက်တစ်ခု: ProBalance ၏“ Stay Home” PSA အသစ်နှင့် Blackmagic ဒီဇိုင်းကင်မရာများနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ထားပြီး DaVinci Resolve